मतदाताले मलाई भारी मतले जिताउँछन् – Todaypokhara
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३१ औ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि ६ जना प्रतिस्पर्धी चुनावी मैदामा उत्रिएका छन् । भदौ ३१ र असोज १ गते हुने चुनावलाई मध्यनजर गर्दैै सबै उम्मेदवार आआफ्ना एजेन्डासँगै चुनावी प्रचारमा लागेका छन् । थुपै व्यावसायिक संस्थाको नेत्तृत्वदायी भूमिका निभाइसकेका विश्वशंकर पालिखे पनि चुनावी मैदानमा छन् । उनीसँग पोखराप्लस अनलाइन पत्रिकाका समाचार संयोजक छवि मगरले गरेको कुराकानी ।
मतदाता रिझाउनलाई कस्तो प्रचार शैली अपनाउनु भएको छ ?
विगतका निर्वाचनहरुमा मैले मेरा मतदाताहरुको माझमा जाने सुअवसर गुमाननुप¥यो । किनकि मत माग्ने बेलामा हामी पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको आन्दोलनमा थियौं । मेरो लागि त्यो आन्दोलन सफल बनाउनु कर्तव्य थियो । त्यतिबेला म मतदाताकहाँ पुग्न सकिन । मेरा मित्रहरुले विश्वास गरि अधिकतम मत दिई बिजयी पनि गराउनुभयो । तर, यसपालि नेत्तृत्वकै भूमिकामा रहेकाले मैले अधिकतम व्यवसायीको घरदैलोमा पुग्ने, उहाँहरुसँग साक्षात्कार गर्ने, समस्या सुन्ने, र आफ्नाबारेमा केही कुरा राख्ने गरी अगाडि बढेको छु । विभिन्न समूहका मित्रहरुलाई मेरा अतितका काम कर्म, वर्तमान अवस्था र भावी योजनालाई बुझाउँदै हिडेको छु । र मित्रहरुको सुझाव र सल्लाहलाई आफ्नो मुद्दामा कसरी समाहित गर्न सकिन्छ भनी म योजनारत छु ।
‘सपना नै विपनाको खाका हो ।’ यो मेरो २०६१ सालको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा घोषित नारा हो । त्यो समयमा मैले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको मुद्धालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको थिएँ । मित्र राष्ट्र चीनका ग्वाङ्जाओ, कुन्मिन, र लिञ्जीसँग पोखरा उपमहानगरपालिकाको भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै विभिन्न सहयोग तथा योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु जस्तै दुई वटा दमकल ल्याउनु, भूकम्पबाट प्रभावितका लागि सहयोग ल्याउनु, पोखरा उपमहानगरपालिकालाई आइटीसम्बन्धी सहयोग ल्याउनु भोलीको सोलार सिटीको रुपमा तिब्बत सरकारबाट पोखरालाई सोलार सिटी बनाउन सोलार सडकबत्ती ल्याउनु लगायतका योजनालाई महात्वाकांक्षी भनिन्छ भने हो म महात्वाकांक्षी हुँ । समग्र पोखरा र पोखरेली उद्योगी व्यवसायीहरुको विकास र उत्थान को लागि सपना देख्नु मेरो महत्वाकांक्षा हो ।
उसो भए, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको नेत्तृत्व लिने होडबाजीमा लाग्नु महत्वाकांक्षाको एउटा रुप भन्न मिल्छ ?
२०६१ सालमा म पोखरा उद्योग को प्रत्यासी भई दोस्रो नम्बरमा आएर निर्वाचनमा पराजित भएँ । धेरैजसको पराजित भइसकेपछि पलायन हुने गर्छन् । मैले त्यो पलायन हुने परिपाटीलाई चुनौती दिँदै उद्योगी व्यवसायीहरुको मतलाई शिरोधार्य गर्दै पुनः कार्यकारी सदस्यको रुपमा ६ वर्षदेखी कार्यरत छु । साथै कार्यकारी सदस्य भएको अवस्थामा पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, समग्र ४ नम्बर प्रदेशको प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ भनी यसको सुनिश्चिताको लागि निरन्तर लागि परेको छु । समग्र पोखरेलीलाई के अवगत छ भने मेरो भूमिका पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि अवगत नै छ । यसको सुनिश्तिताको लागि अझै निरन्तर लागि रहनुपर्नेछ । मेरा विभिन्न योजनाहरु छन् तिनलाई कार्यान्वयन गराउन तथा व्यवसायिक हक हित र उत्थानको लागि काम गर्नलाई एउटा फोरम चाहिन्छ । त्यस्तो गतिलो फोरम भनेको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ पनि एक हो । ४नम्बर प्रदेशको राजधानीको रुपमा अगाडी बड्ने अवसर पाएको पोखरा र यहाँको उद्यम व्यवसायहरुको उत्थान र विकासको लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु समयको माग हो । सो निर्दृष्ट उदेश्य प्राप्तिको लागि सबल सक्षम सहयोगी नेत्तृत्वको खाँचो रहने तथा यसमा म आफूलाई आफ्ना निकटका आफन्त, सहयोगी उद्योग व्यवसायीहरुको सुझाव सल्लाह र साथले म यसमा अगाडि बढेको हुँ । म नेत्तृत्वमा आए भने मेरो राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धले पोखराको विकासमा अझ ठूलो टेवा पुग्नेमा म विश्वस्त छु ।
विश्वास, परिपक्वता, दृढ संकल्प जुझारुपन विकासप्रेमीका रुपमा मैले आफ्नो छवि पोखरामा स्थापित गर्न म आफै सफल भएको छु जस्तो लाग्छ । यहाँहरुले मलाई चिन्नु पनि भएको छ, बुझ्नु पनि भएको छ । यिनै विश्वासका कारणले म आफूलाई यिनै कारणले मतदाताले मलाई भारी मतले जिताउँछन् । मेरो मुख्य एजेन्डा भनेकै पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको सुनिश्चितता, सोलार सिटीको बनाउनु लगायतका छन् ।